Brekacciated mookaite, opaque nke na-acha ọcha, matrix lined mara mma - vidiyo
Tags Emebiri, Mookaite
Buyzụta mookaite eke sitere n'okike na ụlọ ahịa anyị
Mejuputara mookaite nke agbajiri agbaji bu nke opaque nke chara acha nke dikwa akwa translucent nwere ezigbo matrix lined. Matrix a chọtara na Mookaite na-agbaji bụ nke a na-achọkarị nke ọma ma nwee ike inye okwute ahụ ụdị foto nke agba sitere na odo mustardy ruo na ndị ọcha na agba aja aja.
Mookaite bụ jasper Australia nke na-ejikọta agba agba ọkụ na jasper na-acha ọbara ọbara. Ọ na-agba ume ọchịchọ maka ahụmahụ ọhụrụ ma na-enyere aka ịnọgide na-enwe nguzozi n'etiti ọrụ mpụga na nzaghachi dị n'ime ya. Ọ na-eme ka obi dị jụụ ma na-agba ume agbagha.
"Mookaite" bụ aha a na-edeghị aha, nke a na-akpọ onye Jasper Jasper. Kennedy Ranges nke Australia nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na ntinye na nso Mooka Creek bụ ebe, ebe a hụrụ nkume a na aha ya. Jasper nke Australian a nwere nkwenkwe siri ike ma dị egwu n'ile anya kristal Mookaite. A na-ewerekwa Moomite Jasper dị ka nkume na-agwọ ọrịa dị ike nke na - ejikọta onye ọ bụla na ike dị irè nke ụwa. A na-amarakwa nkume nkume aboriginal a dị ka nkume mama Mother Earth, nke bụ nnukwu nkume dị egwu n'ụwa nile, n'ihi ikike ikike ọgwụgwọ ya na njikọta ya na ike ụwa.
Kristal nke mookaite gbara agba na-apụta n'ọtụtụ ụdị dị ka Mookite, Moakite, Moukite, Mookalite, Mookerite, Mook ma ọ bụ Mook Jasper, dị ka nke Mooka Creek, onye chepụtara okwute a, Mookaite bụ ụdị ziri ezi.
Enwere ike iwebata mookaite Brecciated dị ka ngwakọta nke chert, opalite na chalcedony. Nkọwa ya dabere na ego silica, nke dị na ihe ahụ. Ingka nká ngwa ngwa bụ otu n’ime ihe ndị dị mkpa ịgwọ ọrịa nke okwute okwute Mookaite.
Mookaite a gbajiri agbaji bụ okwute nke ike, yana ime mkpebi.
Na Australia, mookaite bụ, a ka na-ewere ya dị ka nkume na-agwọ ọrịa nke na-enye ike. E kwuru na ọ ga-ekpuchi onye na-ekpuchi anyị n'ọnọdụ ndị siri ike ma jikọọ anyị na ndị anyị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ. A na-ekwere na anyị ga-abanye "n'ebe a na ugbu a," na-enyere aka na nchọpụta nsogbu na mkpebi.
Ịtụgharị uche na mookaite jasper na-eme ka ị gbanwee ike na ike ị hụ ọtụtụ ngwọta maka nsogbu ọ bụla.
A na-ejikarị mookaite na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa glandular ma ọ bụ nsogbu afọ, hernias, ruptures na njigide mmiri, na ndị na-ahụ maka yoga na-eji ya mee ihe iji mezie ma mepee nke mbụ, nke abụọ na nke atọ.
Brecciated mookaite, si Australia
Tags Emebiri, Mookaite, Pink